Mazava ireo hevitra havadika ho lalàna - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fy Andrianarison amin’ny teny fohy?
Renim-pianakaviana, manambady ary manan-janaka mianadahy.
Zanak’Ambohidratrimo aho : ny raiko ramose Donné avy ao Mahabo, ny reniko Ramatoa Suzy avy ao Mananjara. Nianatra tao amin’ny CEG sy Lycée Ambohidratrimo. Nanovo fianarana teny frantsay teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo ary nandalina manokana momba ny asa fanaovan-gazety tao amin’ny SAMIS-ESIC Masina Misely Amparibe. Ny Gazety Lakroan’i Madagasikara no toerana voalohany nandray ahy ho mpiofana hiantsoroka pejy mahakasika tanora, pejy fanabeazana. Efa tazana teto ny lalana na fanamafisana ny efa nombana angaha no marimarina kokoa.
Mikasika ny politika, dia nandalina ny fahaiza-mitarika sy ny Demokrasia teo anivon’ny Friedrich Ebert Stiftung (na FES) tamin’ny alalan’ny fandaharan’asa YLTP (Youth Leadership Training Program) ny taona 2015.
Nahatonga anao hirotsaka ?
Nisafidy ny hirotsaka eto Marovatana aho satria tena Zanak’Ambohidratrimo tanteraka, zanak’i Mahabo izay iray amin’ireo kaominina 24 mandrafitra ny fari-pifidianana. Tsiahiviko izy ireo : Ivato, Talatamaty, Antehiroka, Mahitsy, Ambohitrimanjaka, Anosiala, Ambohidratrimo, Ampanotokana, Ambatolampy Tsimahafotsy, Merimandroso, Ampangabe, Antanetibe Mahazaza, Iarinarivo, Ambato, Fiadanana, Mahabo, Anjanadoria, Avaratsena, Ambohimanjaka, Ambohipihaonana, Mananjara, Mahereza, Manjakavaradrano, Antsahafilo. Nobeazina teto aho, niaina teto ary mahita fa lavitry ny fandrosoana ny eto kanefa azo hatao tsara ny mampandroso azy. Iray amin’ireo hevi-dehibe fito arosoko ny fampandrosoana an’ity toerana mamiko ity.
Hevi-dehibe havadika ho lalàna, inona avy izany ?
Misy fito izy ireo. Raha fintinina, dia ny fijerena akaiky ny hetra alaina amin’ny mpiompy no voalohany fa raha ny zava-misy ankehitriny dia mahatsiaro voa mafy ny mpiompy, ny manaraka dia ny resaka fandriampahalemana ary eo koa ny resaka fiahiana ara-sosialy dia ny fiahiana ara-tsosialy ny tantsaha, ny mpanjono. Farany ny resaka karatany ho an’ny 105 manokana.
Nanao ahoana ny fiatrehana izay tapany voalohany tamin’ny fampielezan-kevitra izay ?
Tsara tsy nahitana olana lehibe. Ho ahy izao dia efa misy ny kaominina na fokontany akory aza efa niverenana indroa voalohany tamin’ny fotoana mialohan’ny fampielezan-kevitra ka nampahafantarana ny tena na dia efa maro aza no nahafantatra ahy, ary izao indray amin’izao fotoana fampielezan-kevitra hisarihana ny olona hifidy ny tena.
Nandritra izay fotoana izay dia afaka nitafa tamin’ny sokajin’olona rehetra aho. Hatramin’ny ankizy aza dia nitafana satria misy tamin’izy ireny no liana amin’ny fifanakalozan-kevitra. Te ny tanora tia fanatanjahantena teo ny renim-pianakaviana teo ny lehilahy. Tsy nifidy taona na tanora na efa zokiolona. Nihaino sy nanangona ny olana iainan’ny olona nandritra ny fotoana mialoha ny fampielezan-kevitra nitondra fanazavana mahakasika izay olana naseho sy hita.
Ny fiomanana ?
Ny tenako manokana dia efa nanaraka fiofanana natolotry ny FES. Tsy miankina aho fa tsy midika fa mandeha irery. Nanaraka fiofanana avokoa ireo akaiky ahy. Ny delege isaky ny biraom-pifidianana dia nanaraka fiofanana nomen’ny CENI sy ny fikambanana EISA. Tsy natao ambanin-javatra izany.
Teny hamehezana ny resaka ?
Manentana ny olom-pirenena afaka ny hifidy handray ny andraikiny. Haka ny kara-pifidianana raha mbola tsy naka an’izany. Manentana ny olom-pirenena hihaino ny kandida tsirairay. Tsy matahotra fifaninanana aho matoa mandrisika ny hanaovana an’izany. Farany, manentana ny mpifidy hametraka ny safidiny amin’ny laharana faha-5 amin’ny 27 mey izao. Vehivavy tanora sahy mandray andraikitra ary efa zatra manadray andraikitra. Olona tsy mivadika amin’ny teny nomeny.
Municipales et communales : Les élections? C’est parti mon ami - il y a 10 jours
Elections : Un report des communales plutôt politique que technique - il y a 17 jours